के गर्दैछन् सीके राउत युरोपमा ? - नेपाल समय
के गर्दैछन् सीके राउत युरोपमा ?
काठमाडौं- सरकारसँग ११ बुँदे सहमतिपछि मूलधारको राजनीतिमा आएका डा. सीके राउत यतिबेला विभिन्न देशको भ्रमणमा व्यस्त छन्। क्याम्ब्रिज विश्वविद्यालयबाट विद्यावारिधि गरेका उनले युरोप विभिन्न विश्वविद्यालयमा नेपालको अर्थ–राजनीति र मधेस मामिलाबारे प्रवचन दिएका छन्।
तर, डा.राउत प्रवचन दिन मात्रै होइन, अन्य प्रयोजनका लागि पनि ती देशहरूको भ्रमणमा गएको बुझिएको छ। खासगरी उनले सम्बद्ध देशमा राजनीतिक भेटघाट पनि गर्दै आएको स्रोतले बतायो ।
निर्वाचन आयोगबाट जेठ ६ गते जनमत पार्टी दर्ताको प्रमाणपत्र पाएका डा.राउतको संगठन मधेसका जिल्लादेखि स्थानीय तहसम्ममा विस्तार हुँदैछ। अहिले तदर्थ समिति र संयोजक समितिका रुपमा पार्टी संगठन विस्तार भइरहेको छ।जनमत पार्टीका अनुसार विभिन्न जिल्लामा जनसभाको तयारीसमेत भएको छ।
किन गइरहन्छन् विदेश?
करिब तीन वर्षपहिले गोप्य रुपमा युरोप पुगेका डा.राउतले स्वतन्त्र मधेस गठबन्धनलाई बेल्जियमस्थित अनरिप्रजेन्टेड नेसन एन्ड पिपुल अर्गनाइजेसन (युएनपिओ) मा दर्ता गराएका थिए।
त्यसअघि उनले हार्डवर्ड युनिभर्सिटीमा पनि प्रवचन दिएका थिए।
अहिले युरोप भ्रमणमा रहेका डा. राउतले जेठ २९ गते अस्ट्रियाको भियाना युनिभर्सिटीमा प्रवचन दिएका थिए। उनको प्रवचन नेपालको विकासमा छिमेकी मुलुकको सक्रियतालगायतका विषयमा आधारित थियो।
असार २ गते डा.राउतले लन्डनको एसओएएस युनिभर्सिटीमा सीमान्तकृत समुदायका विषयमा प्रवचन दिए । त्यस्तै उनले असार १९ गते अक्सफोर्ड युनिभर्सिटीमा प्रवचन दिएका छन्।
अक्सफोर्ड युनिभर्सिटीको प्रवचनपछि डा.राउत फर्किने तयारीमा छन्। यसपछि उनी नयाँदिल्ली जाने कार्यक्रम छ । त्यहाँ पनि उनले एउटा विशेष अन्तरक्रियामा सहभागी जनाउनेछन् ।
त्यसको दुई सातापछि उनी अमेरिका लाग्नेछन्। जुलाई ६ मा अमेरिकामा उनी एउटा कार्यक्रममा सहभागी हुनेछन् । तर कार्यक्रमबारे विस्तृत केही सार्वजनिक गरिएको छैन ।
डा. राउतको विदेश भ्रमणबारे जनमत पार्टीका नेता चन्दन सिंह भन्छन्, ‘उहाँ वैज्ञानिक मात्र होइन जनमत पार्टीका अध्यक्षका रुपमा सबै ठाउँमा जाँदै हुनुहुन्छ। त्यहाँ सबैसँग भेटघाट हुन्छ। पार्टी संगठन विस्तारको कार्य पनि भइरहेको छ।’
सिंहका अनुसार डा. राउतको विदेश भ्रमण पार्टीप्रति अन्तर्राष्ट्रिय समर्थन जुटाउनका लागि पनि हो । उनले भने, ‘डा. राउत नेपालको मात्र होइन, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको नेता हुनुहुन्छ। उहाँले विदेश भ्रमण गर्दैमा र ती देशसँग सम्बन्ध विस्तार गर्दैमा कोही आत्तिनु पर्दैन।’
सहमति पालनामा ढिलाइ
फागुन २४ गते स्वतन्त्र मधेस गठबन्धन र सरकारबीच ११ बुँदे सहमति भएको थियो।
सहमतिको बुँदा नम्बर ५ मा स्वतन्त्र मधेस गठबन्धनका नेता तथा कार्यकर्तामाथि लगाइएको सम्पूर्ण मुद्दा फिर्ता लिने उल्ल्लेख छ।
सहमति भएको तीन महिना बित्दासमेत सरकारका तर्फबाट गठबन्धनका नेताकार्यकर्तामाथि लगाइको मुद्दा फिर्ता लिइएको छैन।
सहमति कार्यान्वयन समितिका संयोजकसमेत रहेका नेता सिंहले भने सहमति कार्यान्वयन प्रक्रियामा रहेको दाबी गरे ।
‘हामीले हाम्रो तर्फबाट सम्पूर्ण विवरण बुझाइसकेका छौं। गृह मन्त्रालयले मुद्दा फिर्ता प्रक्रिया अगाडि बढाएको हामीलाई जानकारी दिएको छ’, सिंहले भने, ‘नियमावलीका कारण राज्य विप्लवको मुद्दा फिर्ता लिन ढिलाइ भइरहेको छ। सरकारले मन्त्रिपरिषद्मा लगेर एकैसाथ मुद्दा फिर्ता लिने तयारी गरेको पनि जानकारी दिइएको छ।’
सरकारसँग भएको सहमतिअनुसार स्वराज आन्दोलनका प्रथम सहिद राममनोहर यादवको परिवारलाई रोजगारी दिने व्यवस्था भइरहेको सिंहले बताए।